कोरोना –कुन जिल्लामा कति, महिला र पुरुषमा कस्तो छ प्रभाव ? हेर्नुहोस् विवरण | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कोरोना –कुन जिल्लामा कति, महिला र पुरुषमा कस्तो छ प्रभाव ? हेर्नुहोस् विवरण
कोरोना –कुन जिल्लामा कति, महिला र पुरुषमा कस्तो छ प्रभाव ? हेर्नुहोस् विवरण	अठ्ठाइस जिल्लामा फैलियो, संक्रमित पुरुष बढी, निको महिला
जेठ ४ गते, २०७७ - १७:२०
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय ९१ पुगेको छ । हिजो शनिबार मात्रै नेपालमा कोरोनाका कारण पहिलो मृत्यु रेकर्ड भएको छ भने अर्काे १ जना आज आइतबार थपिएका छन् ।
कोरोनाबाट मुलुकमा शनिबार पहिलोपटक २९ वर्षीया गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो । संक्रमितमध्ये ३६ जना निको भएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारीले सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् ।
संक्रमित पुरुष बढी, निको महिला
संक्रमितमध्ये ८१‍‍.९ प्रतिशत पुरुष र ८१.१ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।
निको हुनेमा चाँहि २५ प्रतिशत महिला छन् । सबैभन्दा बढी २० देखि २९ वर्ष उमेरका संक्रमित निको भएका छन् ।
३० देखि ३९ उमेर समूहका ६ जना, ४० देखि ४९ र ५० देखि ५९ उमेर समूहका २/२, ६० देखि ६९ उमेर समूहका ४ जना, ८० देखि ८९ उमेर समूहका एक जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२० देखि २९ उमेर समूहका सबैभन्दा बढी ६४ जना संक्रमित छन् । त्यस्तै ० देखि ९ उमेर समूहका ७ जनामा कोरोना देखिएको छ ।
३० देखि २९ उमेर समूहका ५७ जना, १० देखि १९ र ४० देखि ४९ उमेर समूहका २७ जना, ५० देखि ५९ उमेर समूहका १६ जना, ६० देखि ६९ उमेर समूहका १४ जना, ७० देखि ७९ उमेर समूहका २ जना र ८० देखि ८९ उमेर समूहका १ जना संक्रमित रहेका छन् ।
हालसम्म २८ जिल्लामा कोरोना फैलिसकेको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्सामा ९१, कपिलवस्तुमा ४२, बाँके र उदयपुरमा ३३/३३, रुपन्देशीमा २८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
आइतबार बिहान मात्रै रौतहटमा १० जना कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए ।
जेठ ४ गते, २०७७ - १७:२० मा प्रकाशित